Shan Koe Mee လပျကီးကာစီနို 1.43 APK
Trang chủ Games Casino Shan Koe Mee လပျကီးကာစီနို 1.43 APK
Giới thiệu Shan Koe Mee လပျကီးကာစီနို 1.43 APK
Game Shan Koe Mee လပျကီးကာစီနို 1.43 APK là dòng game Casino
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အွန်လိုင်းဂိမ်း ကစားဖို့ရှာနေလား ? အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ဂိမ်းလေး သင့်အတွက်ရှိနေပြီနော်၊ တကယ့် ကာစီနိုမှာ ကစားရတဲ့ ခံစားမှုမျိးပေးစွမ်းမယ့် “ Shan Koe Mee လပ်ကီး “ ဂိမ်းလေးက သင့်အတွက်ပဲနော်
အမြင်သစ်ဆန်းတဲ့ 2D ရုပ်လုံးကြွပုံလေးတွေ ၊ ကစားရရှင်းလင်းလွယ်ကူပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကစားနိုင်တဲ့ လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဂိမ်းလေးမှ သင့်ကိုကြိုဆိုနေပါတယ်
ဂိမ်းအမျိးအစား စုံစုံလင်လင်နဲ့ ဂိမ်းအမျိးပေါင်း7မျိး ပါဝင်ပါတယ်
ရှမ်းကိူးမီးဂိမ်းလေးကတော့ မြန်မာ့ရှေးရိုးရာ ကစားနည်းလေးပါ ။ ကစားသမားတစ်ဦးစီကို ဖဲနှစ်ကဒ်စီပေးဝေထားပြီး ကစားသမားတို့သည် မိမိ၏ရလဒ်ပေါ်မူတည်ကာ နောက်တစ်ကဒ်ဆွဲနိုင်ပါတယ် ။ ရှမ်း ၈ ပွင့် နှင့် ရှမ်း ၉ ပွင့်ရပါက နောက်တစ်ကဒ်ထပ်ဆွဲရန် မလိုအပ်ပါ။ ကစားသမားများ၏ဖဲကို ဒိုင်၏ဖဲနှင့်နှိင်းယှဉ်ရမှာဖြစ်ပြီး အလျော်အစားပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်း ကစားနည်းကတော့ ရှမ်းကိုးမီးကစားနည်းနှင့် ဆင်တူပါတယ်။ ရှမ်းကစားတဲ့အခါမှာတော့ ကစားသမားတစ်ဦးဆီသည် အလှည့်ကျဒိုင်ကိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီး အခြားကစားသမားများ၏ဖဲနှင့်ယှဉ်ကာ အလျော်အစားပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ရှိးကစားနည်းကတော့ ပိုကာကစားနည်းနှင့် ဆင်တူပါတယ် ။ စုစုပေါင်း ဖဲ 28 ကဒ်ထဲမှ ဖဲ5ကဒ်စီကို ကစားသမားများအားဝေပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံးဖဲစီနိုင်သောကစားသမားသည် အနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည် ။
ဖဲဝေသူသည် ဖဲကဒ်နှစ်ကဒ်ဆီကို ကစားသမားဘက်ခြမ်း နှင့် ဒိုင်ဘက်ခြမ်းအတွက် ဝေကေးမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ နေရာ 1 နှင့်3အခြမ်းသည် ကစားသမားဘက်ခြမ်းဖြစ်ပြီး2နှင့်4ဘက်ခြမ်းသည် ဒိုင်ဘက်ခြမ်းဖြစ်ပါသည်။ ကစားသမား၏ဖဲသည် ဒိုင်၏ဖဲနှင့် နှိင်းယှဉ်ပြီး အနိုင်အရှုံးသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
5. ၁၃ ချပ်ပိုကာ
ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး ပိုကာကတော့ မပါမဖြစ်ပါပဲနော် ။ ကစားသမားများသည် စုစုပေါင်း ဖဲ ၁၃ ကဒ်စီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ဖဲကဒ်တွေကို ၃ တန်းစီရမှာဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံးဖဲရအောင်စီနိုင်တဲ့ကစားသမားသည် အနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
ကံစမ်းချင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဂိမ်းလေးက အံစာဂိမ်းပါ ။ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး လောင်းကြေးထပ်ကာ ကစားလိုက်ရုံပါပဲ
ကံကောင်းခြင်းတွေစမ်းသပ်ဖို့ Spin လှည့်ကာ စလော့ဂိမ်းကို ကစားနိုင်ပါပြီ
“Shan Koe Mee လပ်ကီး” ကို android ဖုန်းတိုင်းတွင် ကစားနိုင်ပါပြီ ။ အပတ်စဉ်လက်ဆောင်တွေလည်းပေးနေတာဆိုတော့ လက်ဆောင်တွေ မလွတ်တမ်းရယူဖို့ ဂိမ်းလေးကို ကစားလိုက်တော့နော်
Looking to play world class online games? We haveagame for you that will give you new experiences and thrills. “Shan Koe Mee Lucky” isagame that gives you the feeling of playing inareal casino.
Innovative 2D animation Welcome to our most exciting and easy-to-play game that is easy to play and easy to play
There are7different types of games
1. Shan nine lights
Shan Ko Mi Game isatraditional Burmese game. Each player is dealt two cards and players can draw another card depending on their result. If you get 8 Shan and9Shan, you do not need to draw another card. Players’ cards must be compared to the referee’s hand and compensation must be made.
The Shan game is similar to the Shan nine fire game. When playing Shan, each player has the right to take turns and the compensation is compared to the cards of the other players.
The game is similar to poker. Out ofatotal of 28 cards,5cards will be dealt to each player and the player with the greatest number of cards will win.
The dealer deals two cards for the player side and the referee side. The 1st and 3rd sides are on the player side and the 2nd and 4th sides are on the referee side. The player’s card will be compared to the referee’s card to determine the winner or loser
5. 13 cents
The world’s most popular poker is not included. Players will receiveatotal of 13 cards each. The cards are dealt in three rows, and the player who arranges the largest card wins
If you want to try your luck, the best and most exciting game isapuzzle game. Just pick your choice and play again
You can now spin and play the slot game to try your luck
“Shan Koe Mee Lap Key” can be played on any android phone. Give away weekly gifts, so play this game to win free gifts
Bài trước[777TOWN]パチスロ ガールズ＆パンツァー 3.0.1 APK
Bài tiếp theoFrench Belote 0.8.11 APK
Sueca – Online 0.7.2.0 APK
Slots Journey – Cruise & Casino 777 Vegas Games 1.21.0 APK
Solitaire TriPeaks – Play Free Card – Solitairians 0.993 APK
Solitaire 25.1.1-ps APK
ดัมมี่ไทยออนไลน์–รวมไพ่แคง ป๊อกเด้ง เก้าเก ไฮโล 1.0.0.19 APK
Triple Double Diamond Slots 2.7 APK